Ity andro vaovao ao amin'ny UNWTO ity dia dingana goavana ho an'ny dia, fizahan-tany ary ny toekarena manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » WTN » Ity andro vaovao ao amin'ny UNWTO ity dia dingana goavana ho an'ny dia, fizahan-tany ary ny toekarena manerantany
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Ankehitriny, firenena 85 no nifidy ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili hohamafisina hitarika ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany mandritra ny 4 taona hafa.
Androany ihany koa no tsy nisy firenena, na solontena, na olon-tsotra afaka hanontany io fihainoana fanamafisana io satria ara-drariny, miafina ary demokratika. Firenena 29 ihany no nifidy nanohitra ny fanamafisana azy indray.
Tsy fandresena ho an'Andriamatoa Zurab Pololikashvili ihany izany fa ho an'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana, ho an'ny Fanentanana WTN Decency in Election”., ary ho an'ireo Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha – Dr. Taleb Rifai sy Francesco Frangialli – izay naneno ampahibemaso ny lakolosy fanairana tamin'ny fametraham-panontaniana momba ny fizotry ny fifidianana ara-drariny ho an'ny masoivoho izay notompoin'izy ireo nandritra ny taona maro.
Mr. Nandresy tamin'ny fifidianana i Pololikashvili, ary nisy mahery fo nipoitra.
Ny mahery fo tamin’ny fifidianana androany dia ny Hon. Gustav Segura Costa Sancho, Minisitry ny Fizahantany ho an'i Costa Rica, dia nanao fifidianana marina. Amin'ny anaran'i Costa Rica, nangataka latsa-bato miafina tena nilaina izy mba hanamarinana sy hanisy tombo-kase izay mety ho vokatr'izany amin'ny fomba fanao anio. Raha tsy nisy ny fifidianana miafina, dia mbola hisy rahona maizina amin'ny fanodinkodinana mandritra ity dingana ity mandritra ny efa-taona manaraka.
Ny ahiahy rehetra amin'ny fanodinkodinana toy izany dia voafafa ankehitriny. Afaka mifantoka tanteraka amin’ny fitarihana ny fizahantany ho an’ny firenena mpikambana rehetra ny Sekretera jeneraly amin’ny fe-potoam-piasana faharoa.
Tsy hanana adidy manokana amin'ireo firenena ao amin'ny filankevitra mpanatanteraka izy. Tsy hisy fifidianana intsony. Efa azo antoka sy voaisy tombo-kase ny toerany ankehitriny mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasana faharoa. Afaka mifantoka amin'ny fitarihana fizahan-tany manerantany amin'ny alàlan'ny fanamby goavana atrehin'ity sehatra ity izy izao.
Fandresena ho an'ny fizahantany manerantany amin'ny ankapobeny izany.
Hanampy ny Sekretera jeneraly amin’ny fananganana ny lova navelany koa izany. Mandeha ny tsaho fa hirotsaka ho Praiminisitra Georgia ny fikasany rehefa tapitra ny fe-potoam-piasan'ny UNWTO.
Noho izany dia andro fandresena/fandresena/fandresena/fandresena ho an'ny fizahantany manerantany. Mety izao ny tsy miarahaba an'Atoa Zurab Pololikashvili fotsiny noho ny nandreseny tamin'ny fifidianana madio sy miafina, fa fotoana izao hiarahan'ny rehetra eo amin'ny fizahantany maneran-tany hiara-hiasa amin'ny UNWTO.
Ao anatin'ny tontolon'ny mpandresy dia misy ihany koa ny tontolon'ireo izay nanao fanoloran-tena poakaty. Farafahakeliny firenena 35 izay nanamafy ny ambadiky ny sehatra hanao hetsika iray, dia nanao ny mifanohitra amin'izany. Angamba izany dia azo antsoina hoe "politika", ary ny politika indrisy fa matetika dia mifototra amin'ny setroka sy fampanantenana poakaty. Toa tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny sehatra, firenena, na fikambanana izany.
Juergen Steinmetz ny eTurboNews, ary ny sezan'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, mahatsapa fa nisy enta-mavesatra nesorina tamin’ny sehatry ny fizahantany ankehitriny. Fotoana izao hametrahana ny tsy fitovian-kevitra sy ny fanakianana ary manampy ny UNWTO hijanona eo amin'ny lalana ho amin'ny tombotsoan'ny fizahantany manerantany.
Hoy Atoa Pololikashvili: “Any amin'ny faritra rehetra maneran-tany, ny valan'aretina dia nanazava ny maha-zava-dehibe ny sehatra misy antsika - ho an'ny fitomboana ara-toekarena, ho an'ny asa sy varotra, ary ho fiarovana ny lova voajanahary sy kolontsaina. Tsy maintsy manararaotra an'io fotoana io isika - hanova ny sitrapo ho fanohanana mivaingana. "
Nanaiky i Steinmetz ary nanolotra Atoa Zurab Pololikashvili sy UNWTO ny fanohanany sy ny fiaraha-miasany feno.
"Ho an'ny firenena maro miankina amin'ny fizahan-tany, ny fananana feo eran-tany miray hina, ary ny hetsika voarindra dia mety ho dingana goavana ho an'ny toekarena toy izany", hoy i Steinmetz namarana.